Waa kuwan sida aadan ugu gubin Suuqgeynta Saameynta
Jimco, Oktoobar 3, 2014 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Waxaan horey uga qornay dabinada suuq geynta saamaynta. Sida mid ka mid ah magdhowga waqti ka waqti ahaan saameyn ahaan, waxaan ka shakisanahay inta saameyn ee xiriirka suuqgeynta ay yihiin dejin. Xaaladda marka la eego, horraantii sannadkan waxaa laygu casuumay Brickyard maxaa yeelay waxaan ahay saamilee maxalli ah baraha bulshada. Waxaa jiray koox dad ah oo laga casuumay warbaahinta bulshada - dhammaantoodna leh dhibco sarre oo leh mashiinka dhibcaha caanka ah ee Indianapolis. Ku
25 Qalabka Warbaahinta Bulshada Cajiib ah
Sabti, Noofembar 2, 2013 Douglas Karr
Waxaa xusid mudan in baraha bulshada ay aad ugu kala duwan yihiin yoolalka iyo astaamaha ay leeyihiin. Sawir-gacmeedkan oo ka socda 2013 Istaraatijiyadaha Istaraatiijiyada Warbaahinta Bulshada ayaa si wanaagsan u kala jajabinaya qaybaha. Markaad qorsheyneyso istiraatiijiyad bulsheed shirkadeed, tirada badan ee qalabka la heli karo ee loogu talagalay maareynta warbaahinta bulshada ayaa noqon karta mid aad u culus. Waxaan diyaarinay 25 qalab oo waaweyn si aan adiga iyo kooxdaada u bilowno, waxaana loo kala saaray 5 nooc oo qalab ah: Dhageysiga Bulshada, Wadahadalka Bulshada, Suuqgeynta Bulshada, Falanqaynta Bulshada
Monday, August 20, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan maqli jiray wax ku saabsan Klout inyar ka hor laakiin fiiro badan ma aan siin ilaa aan kula kulmay qaar ka mid ah kooxda Klout Las Vegas. Waan tijaabiyey waxaanan ogaaday in buundooyinka qaar ay dhiman yihiin. Tusaale ahaan, inbadan oo naga mid ah waxaan leenahay bogag badan, koontooyin fara badan, iyo taariikh khadka tooska ah taariiqda ku xirneyd toban sano decade laakiin Klout saameyn kuma yeelan intaas oo dhan. Markii ugu dambeysay ee Klout cusbooneysiiyo dhibcaha, way iga lumiyeen gebi ahaanba. Ku